Salaad Hiloowle oo soo saaray filim gaaban oo luugu magac darray “Warqad ku socota Iswiidhan” | Somaliska
Salaad Hilowle, waa soo saare soomaaliyeed oo ku hoowlan sameeynta filimadda iyo dokument-teriyadda. Wuxuu dhawaan soo saaray filim gaaban oo loogu magac darray “Brevet till Sverige” (Warqad ku socota Iswiidhan). Filimkan oo ka hadlaya Gabar soomaaliyeed iyo hooyadeed oo waraaqo isku diraya iyagoo kala jooga meelo kala duwan.
Gabadha iyo hooyadeed ee uu filimka ka hadlayo ayaa kala degan magaalooyinka Gävle ee dalka Iswiidhan iyo Muqdisho oo ay hooyadu dib ugu laabatay. Xirriirka keliya ee gabadha iyo hooyadeed ka dhaxeeyaana uu noqday waraaqo ay isku diraan. Soo saare Hilowle oo ka sheekeeynaya filimkaan 15 daqiiqo ah ayaa sheegay in filimka laga dheehan karo xasuusta sawir ahaaneed ee ay hooyadu ka heeysato Iswiidhan muddadii ku nooleeyd ka hor inteeysan dib ugu laaban Soomaaliya halka gabadheedana ay ku nooshahay sawir kale oo ka kuwan kan hooyadeed aaminsan tahay. Hilowle waxaa kale uu sheegay in filimkiisa dul istaagayo dhibaatooyinka la xirriira is dhexgalka, kala duwanaanshaha xagga aqoonsi ahaaneed ee ay kala aaminsan yihiin, mid bulsho iyo cimilo ahaaneed intaba.
Salaad Hiloowle wuxuu dalka Iswiidhan yimid isagoo toddo jir ah haatana waa soddon jir ku hoowlan sameeynta filimo iyo dokument-teri qiimo u leh bulshadda aad na u xiiseeyo sameeynta aflaamta iyo masraxa. Salaad Hiloowle oo ka hadlaya dhibaatooyinka ay leedahay marka qofu yimaado dal qariib ah ee uu qofkaasina yeelanayo labbo dhaqan iyo guri oo kala duwan.
Dhinaca kale mar wax laga weeydiiyey sababta uu ku doortay in filimkiisa lugu sameeyo tuuladda Gävle oo ku taala goboladda dhexe ayuu sheegay in dadka sameeya filimadda ay jecelyihiin magaalooyiinka waa weyn sida Stockholm iyo Göteborg, balse isagu jecel yahay inuu dooro magaalooyin yar oo ay dadka dagani ay gaarayaan 80 000 ilaa 100.000 goobahaas oo goob ay ku dambeeyaan raadadkii hore iyo beero. Tahayna magaallo uu ku isagu qudhiisa ku soo koray oo uu raad ku leeyahay.
Ugu dambeyntiina filimkaan gaaban ee Warqad ku socota Iswiidhan ayaa lugu soo bandhigay carwadda Aflaamka Afrika “Afrika Cinema” Wuxuuna raad raac isbadalka xagga taariikheed ee magaaladda Gävle ku dhacay raadka ay ku leeyihiin dhalaanka ajaanibta ah ee soo galay iyo guryaha ay degan yihiin. Filimkaan oo aad loogu riyaaqay, ayaa lugu soo bandhigay carwada aflaamta ee Göteborgs Filmfestival bishii janaayo ee sanadkan. Wuxuu sheegay Hiloowle in filimkaasi aad loogu bogay hadana uu doonayo inuu u talaabo Hollywoodka oo ku haminayey weligiiba. Salaad Hiloowle waa soomaaligii ugu horeeyey ee soo saare ka noqda filim gaaban oo looga hadlayo is dhexgalka iyo dal qurbaha.